Amathiphu - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 2)
I-United Arab Emirates iyiqembu lama-emirates futhi phakathi kwawo kukhona iDubai. Isikhathi esithile manje sekuthandwa kakhulu yi-Do you know how to dress in Dubai? Izikhindi, iziketi ezincane nebhikini noma iziketi ezinde, imikhono emide neduku?
Ungahambela kanjani eNyakatho Korea
Sekumbalwa amazwe obuKhomanisi asele emhlabeni kanti elinye lawo yiNyakatho Korea. Umbuzo uwukuthi, ngingaya yini ukubuka indawo lapho? Akusilo izwe elivulekele ezokuvakasha ngabe bewazi ukuthi ungahambela eNyakatho Korea? Yebo! Kuqashwe njalo, yebo, nangeminye imikhawulo eminingi, kepha ngaphandle kokungabaza, kuzoba uhambo olungenakulibaleka.
IMelika liyizwekazi elikhulu, elihlukahlukene labantu bomdabu kanye nabokufika, kokubili enyakatho naphakathi nendawo naseningizimu. Kepha iqiniso lokuthi isiko laseMelika linjani? Amanye amathiphu asebenzayo okufanele uwagcine engqondweni uma usohambweni, emsebenzini noma esifundweni.
Enye yezindawo zasehlobo ezinhle kakhulu emhlabeni wonke iziqhingi zaseGrisi. Yeka ukuphela! Ayikho enye indawo enhle ehlobisa iMedithera. Umshuwalense Uma nihamba nodwa, njengombhangqwana noma njengomndeni, ningakhathazeki, kukhona isiqhingi saseGrisi esenzelwe nina.
Imithi yokugoma yokuya eBrazil iyindlela engcono yokuvimbela izifo futhi uthokozele uhambo lwakho ngaphandle kwezinkinga
Ukuhlolwa kweCovid okudingeka ezweni kukhombisa ukungabi nokufana. Ngamunye wabo usungule amazinga akhe nezimfuno zakhe.
Manje njengoba amakhaza esefikile, kubaluleke kakhulu ukuhlomiswa kahle uma uhamba ngemoto. Iziphepho kanye ...
Uwathenga nini amathikithi endiza
Sonke siyakuthanda ukuhamba, ikakhulukazi uma sithola ukuthengiselana futhi sikwenzela imali encane. Ngesikhathi ...
Amaholide ayeza! Amathiphu wokonga ohambweni lwakho ngemuva kwe-coronavirus
Ngemuva kobhadane lwe-coronavirus, sekuyisikhathi sokuhlela amaholide akho bese wonga ohambweni lwakho. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kanjani?
Ungayikhansela kanjani indiza
Enye yezinzuzo zokuhlelela iholide lakho kusenesikhathi ukonga imali uma kukhulunywa nge ...
Uhambo ngomzuzu wokugcina
Ukuthatha uhambo ngomzuzu wokugcina kungenye yezinto ezijabulisa kakhulu kunoma iyiphi i-globetrotter. Ukuphunyuka ...
ISilk Road ingenye yemizila edume kakhulu emlandweni, isixhumi esikhulu emhlabeni ...
Bhala phansi lawa macebiso uma uzoya eVietnam noma ungenayo i-visa
Ngabe uya eVietnam? Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukuthi ubheke lawa macebiso mayelana ne-visa, imigomo kanye nolunye ulwazi onentshisekelo ngalo ohambweni lwakho.
Thola amanye amathiphu okuhlala ezindlini zasemakhaya eGalicia kanye nokukhuthazeka ngezindlu ezinhle kakhulu zasemakhaya.
Ukuya ePortugal ngemoto
Ukuhambela ePortugal ngemoto kungenye yezindlela ezithakazelisa kakhulu zokwazi izwe elingumakhelwane. Cishe…
Kunentaba ebanzi enqamula ingxenye enkulu yeYurophu: i-Alps. Izintaba zalo zinhle futhi eziningi zazo ...
Kubantu abaningi, izilwane ezifuywayo nokuhamba kwabo yizinkanuko ezimbili okunzima kakhulu ukukhetha phakathi kwazo. Esikhathini esedlule,…
Ungayikhetha kanjani inkampani yokuvakasha
Sikutshela ukuthi ungayikhetha kanjani i-ejensi yezokuvakasha enezeluleko ezithile ezithokozisayo ezisiqondisayo ukuthi siqashe lolu hlobo lwenkonzo.
Igama elithi geek liyi-neologism kanye nesikhathi sokusetshenziswa kwansuku zonke nokungahlelekile okuze kwaqokwa ...
Izibani ZaseNyakatho, eNorway
Esinye sezimo zemvelo ezinhle kakhulu ukuzibona yilokho okubizwa ngamalambu asenyakatho noma i-aurora borealis. Yini umbukiso…
Umshuwalense wokuhamba emhlabeni jikelele
Sikutshela ukuthi ungawukhetha kanjani umshwalense wezokuvakasha wamazwe omhlaba nokuthi kubalulekile ukuthenga enye yalezi zimshwalense.
Kungani uhambo lubalulekile ezinganeni zethu?
Ngubani ongaluthandi uhambo? Kuyafakazelwa ukuthi uhambo lungenye yezindlela zokwelashwa ezihamba phambili ...
Izidingo zokuhamba zisuka eMexico ziye eYurophu
Ukuhamba usuka eMexico uye eYurophu sekuvele kunezidingo ezintsha. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini ohambweni olungenankinga? Sizokutshela!
ILas Rozas Village, ukuthenga okunethezeka eduze neMadrid
Izwe lanamuhla ligxile ekusetshenzisweni, into engenalutho, engapheli, ekhuthazwa kaningana ngonyaka nge ...
Kunini kangcono ukuvakashela iMadrid
IMadrid yidolobha eligcwele impilo, ligcwele imisebenzi okufanele yenziwe nezindawo zokulahleka unyaka wonke….
Ngabe kungcono ukuya eMallorca?
Ngabe kungcono ukuya eMallorca? Uma ungaqiniseki ukuthi yisiphi isikhathi esinconywe kakhulu, ngena unake izeluleko zethu zokuba nohambo olungalibaleki.
Izinqubomgomo zokukhansela ukuhamba zisebenza kanjani
Kulezi zinsuku, abantu abaningi benza ukuqashwa kwamaholide abo kusengaphambili, becabangela izinto ezinjenge ...
Umshuwalense wezokwelapha wokuhamba, okufanele ucabangele
Lapho uhlela uhambo kunezinto eziningi esicabanga ukuthi: indawo yokuhlala, imisebenzi, ...
Ungabelana kanjani ngemoto ozohamba ngayo engaphansi
Sikutshela izindlela ezinhle kakhulu zokwabelana ngemoto ohambweni ukuya ezindlekweni eziphansi, ngezinhlelo zokusebenza ezithokozisayo ezenza kube lula ukusebenza.
Amathikithi e-Eiffel Tower
I-Eiffel Tower iyi-classic yabavakashi eParis. Cishe akunakwenzeka ukuvakashela inhlokodolobha yaseFrance hhayi ukuyikhuphuka ...
Ukusinda kit ohambweni lwakho, yini ongeke uphuthelwe
Ekugcineni lafika lelo holide obulifuna kakhulu futhi likufanele. Uhambo oseluhlelele izinyanga luzo ...
Yini okufanele uyibheke lapho uqasha ikharavani
Sikunikeza imihlahlandlela nemibono embalwa lapho uqasha ikharavani, imoto ekahle yohambo lomgwaqo.
I-Paris Pass, okhiye bokuvakasha edolobheni
IParis ingelinye lamadolobha avakashelwa kakhulu emhlabeni nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ukuphunyuka kwezothando, isonto uvakashela iminyuziyamu yalo noma ukuya endaweni yokucima ukoma Ngabe uya eParis? Ngabe ucabanga ukutshala imali ama-euro ambalwa bese uthenga iParis Pass? Ngakho-ke, funda ngokucophelela, mhlawumbe kukufanele noma mhlawumbe hhayi ...
Thola zonke izinzuzo nokunethezeka kweveni elikhulu lekamu, elilungele uhambo olufushane lwangempelasonto.
Ukuze usebenzise izinsuku ezimbalwa, ukuqasha ifulethi kungenye yezinsizakusebenza ezifunwa kakhulu ngu ...
Sikunikeza amathiphu wokuthi uhlela kanjani futhi uhlele iholide lomndeni elihle ukuze wonke umuntu alithokozele ngokulinganayo.
Ukubhuka uhambo kusengaphambili kungaba nochungechunge lwezinzuzo ezaziwa abahleli abaningi kuphela, njengokulondolozwa okukhulu.
Lapho sihlela ukubaleka kunezinto eziningi okufanele sizinake: ihhotela, imithwalo, ezokuthutha, ...
Yiziphi izingubo ozoziletha olwandle?
Lo ngumbuzo wamarandi ayisigidi obuzwa yilowo nalowo ohamba lapho ebhekene nenselelo yokupakisha ...
Izindiza ngaphandle kokuya kungenzeka kakhulu ukuthi zikwazi ukuhamba izindawo eziningi ngesabelomali esilinganiselwe, ukuthola amadili amahle.
IGibhithe yindawo lapho bonke abahambi beya khona. Kanye empilweni yakho kufanele ubone amapiramidi namathempeli abo asendulo aphile. Yonke iGibhithe Uma uya eGibhithe futhi uhlela ukuhlangana, kufanele wazi amanye amasiko namasiko abo ukuze ungabi luhlaza futhi ube nesikhathi esimnandi.
Imithwalo yesandla ezindizeni, okudingeka ukwazi
Imithwalo yezandla inemithetho nezinyathelo ezithile okufanele kuhlangatshezwane nazo, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kucace ngezidingo zayo.
Kutholakala endaweni eseningizimu yeSierra de Guadarrama, enyakatho-ntshonalanga yoMphakathi waseMadrid naphakathi kwe ...
Izifanekiso zikaJesu ziyaphindaphindeka ezweni lasentshonalanga nelamaKristu futhi lapho ziphakama phezu kwezintaba noma amagquma ziba izindawo ezithandwayo. Enye yezindawo zokuvakasha zenkolo ezithandwa kakhulu eMexico iseGuanajato: yiCerro del Cubilete nesithombe sayo esikhulu sikaKristu.
Iphasiphothi ngumbhalo osemthethweni onemvume yamazwe omhlaba ekhishwe izwe elithile ukuze ...
Indawo enhle ehlobo yiziQhingi zeBalearic, umphakathi weziqhingi ozimele waseSpain oseLwandle iMedithera futhi inhloko-dolobha yawo iPalma. Ngaphakathi Ingabe ufuna ukujabulela ibhishi kuleli hlobo? Iya eMenorca bese uchitha usuku eCala Turqueta: izihlabathi ezimhlophe, amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka, izihlahla zikaphayini, ilanga ...
Ngabe iGrand Canyon yaseColorado ibonakala imangaza kuwe? Awazi iCopper Canyon! BaseMexico futhi bayamangalisa.
Ukuhamba ngaphandle kwesikhwama esihloliwe kuyinjabulo, noma ngabe ubukeka kuphi. Okokuqala, lapho uhamba nemithwalo nje ...
Ukuhamba mahhala njengevolontiya ngenkathi sibona umhlaba kungenzeka, ngoba kunezinhlelo zokuzithandela emazweni amaningi futhi zinokuthunywa okuhlukile.
Enye yezindlela ezithakazelisa kakhulu zokwazi izwe eseholidini ngemoto. Lokhu kusivumela…
Siyini isitifiketi sokugoma somhlaba wonke?
Noma ngabe yini isizathu sohambo lwakho, kufanele njalo kuthathwe izinyathelo ukunakekela impilo yethu. Ikakhulukazi lapho…
Ekuqaleni kungabonakala njengomqondo osangene unikezwe ubukhulu bohambo, kepha vakashela iplanethi uvakashela ezingenakubalwa ...
Fika eSantiago de Compostela yiCamino del Norte
Izigaba zeCamino del Norte, enye yeCaminos de Santiago, zithakazelisa kakhulu futhi zigijima ngasogwini lwaseCantabrian, ezinamabala amahle nezindawo zasemadolobheni.
Yize ekuqaleni kunganikeza ukwesaba okuthile, ikakhulukazi kubahambi abangenalwazi, iqiniso ukuthi ukuhamba wedwa kungaba ...
Ungayithola kanjani i-visa ye-Australia
Enye yezindawo ezinhle zokuvakasha esifundeni sase-Asia-Pacific yi-Australia. Izwe lihle kusukela ...
Uhlela kanjani futhi ujabulele uhambo lwemoto
Ukuthatha uhambo lwemoto kungaba yinto emnandi ngokuphelele futhi ethokozisayo, kepha kufanele ucabangele izinto ezimbalwa ozozihlela.
Ungayikhetha kanjani umshwalense wokuhamba ofanele kakhulu?
Lapho sihlela ukubaleka kunezinto eziningi esicabanga ukuthi: ezokuthutha, imithwalo, ihhotela, ukuvakasha ...
Iyini i-Visa 'Working Holiday' futhi kungani sinentshisekelo kuyo?
Esihlokweni sanamuhla sikutshela ukuthi iyini i- 'Working Holiday' Visa nokuthi kungani sinesifiso sokwazi kubo bonke abafuna ukuhamba nokusebenza.
Ungayithola kanjani ipasipoti ephuthumayo?
Yize silungiselele uhambo kusengaphambili ukugwema izehlakalo ezingalindelekile, kwesinye isikhathi kungenzeka okuthile ...
Ngabe uya eTokyo futhi ufuna ukubona iMount Fuji? Bese ulibhekisa ngaseHakone, ngaphansi kwamakhilomitha ayi-100: amahlathi, izigodi, imigodi, iziphethu ezishisayo, izintaba kanye neFuji.
Lungiselela omunye unyaka izinhlelo zakho zokuya eqhweni nezingane. Iholide elijabulisayo lomndeni wonke ezindaweni zokubhuka ze-ski.
Uyayithanda i-Afrika? Ngemuva kwalokho kufanele uvakashele i-Algeria nezimangaliso zayo: isayensi yemivubukulo, umlando, amapaki kazwelonke, izingwadule, izintaba namabhishi amahle.
Ukuhamba nge-safari e-Afrika kungokunye kokuhlangenwe nakho okucebisayo nokungalibaleki noma yimuphi umhambi angaba nakho. Ngiyazi…
Uma kukhulunywa ngokuhamba, ikakhulukazi lapho kufanele sithathe indiza yokuxhuma ukufinyelela lapho siya khona, isikhathi eside kakhulu ...
Imigoqo ebanda kunazo zonke eBuenos Aires
Uma uya eBuenos Aires ungayeki ukuphuma emabhaleni ngakho-ke bhala phansi uhlu lwamabha apholile kunawo wonke eBuenos Aires, ungawaphuthelwa!
Amazwe ama-5 ayingozi kakhulu ukuhamba yedwa
Yize okokuqala okokuqala kunikeza inhlonipho ethile, ukuhamba wedwa kungokunye kokuhlangenwe nakho okufanele uphile ...
Izeluleko ze-6 zokulala ngendiza ende
Noma indiza ohamba ngayo ngomkhumbi uye eholidini lakho lamaphupho ifakwe uhlelo lokuzijabulisa ...
Ukuvakasha okushibhile e-Easter Island
Ngabe ucabanga ukuthi ukuya e-Easter Island kuyabiza? Susa lowo mbono. I-Easter Island noma iRapa Nui yipharadesi elifinyeleleka ngakho-ke phakamisa ubhaka wakho futhi ulungele.
Ayini amalungelo ami njengomgibeli uma indiza yami ikhanseliwe noma ibambezelekile?
Lapho siya esikhumulweni sezindiza siyothatha indiza, kungenzeka ukuthi ibambezelekile noma ikhanseliwe. Ingabe…
Amathiphu okulungiselela ipotimende lakho ohambweni
Thola izeluleko ezithokozisayo zokulungiselela ipotimende lohambo esilwenzayo, nakho konke okudingayo futhi okubalulekile.
Ungaluhlela kanjani uhambo lwabadala
Thola ukuthi ungahlelela kanjani uhambo lwabadala, ucabange ngemininingwane emincane ukuze bakwazi ukujabulela amaholide abo.
Esihlokweni sanamuhla sikutshela ukuthi ungalihamba kanjani isonto lonke unesikhwama esisodwa sokuphatha. Okwabafana namantombazane.
Ungalukhetha kanjani kahle indawo yokuhlala lapho usohambweni
Thola eminye imibono yokuthi ungakhetha kanjani uhlobo olufanele lokuhlala lohambo ngazo zonke izinketho ezitholakalayo namuhla.
Amathiphu wokujabulela ukuphunyuka ngempelasonto
Thola amanye amathiphu wokujabulela ukuphunyuka ngempelasonto nganoma yisiphi isikhathi, ngemibono emihle yokuthatha uhambo.
Amaqhinga angama-8 okonga isikhathi ekuphathweni kwezokuphepha esikhumulweni sezindiza
Noma kunini lapho kufanele sithathe indiza sibhekana nokulawulwa kokuphepha esikhumulweni sezindiza, inqubo eyisicefe ebandakanya ...
Amathiphu wokuvakashela izindawo eziheha kakhulu zaseBeijing
Ngabe uya eBeijing? IDolobha Elinqatshelwe, iGreat Wall neMausoleum yaseMao akunakuphikwa ngakho-ke bhala phansi lawa macebiso ukuze uzijabulele.
Ukuhamba ngokuphepha emotweni yakho kanye isilwane sakho
Namuhla sikulethela uchungechunge lwezeluleko nezincomo zokuhamba ngokuphepha emotweni yethu kanye nesilwane sethu. Ngabe uyafuna ukubazi?
Ngalesi sikhathi sonyaka, ukuhamba phesheya kuvame kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni ezikude nezingaphandle. Nambitha i ...
Uma uya eBruges thatha ikhefu lesidlo sasekuseni noma itiye kwelinye lalawa ma-caffe amahle ama-5 amahle: ikhofi, itiye, amakhekhe, ushokoledi, ushokoledi.
Amathiphu okulungiselela ukwenza iCamino de Santiago
Sikunikeza amathiphu ambalwa awusizo wokulungiselela ukwenza iCamino de Santiago kwezinye zezigaba zayo ezinhle.
Ukuhamba ngesikebhe yinto entsha, ngakho-ke kufanele sazi izinto ezimbalwa kusengaphambili. Sikunikeza iseluleko esisebenzayo.
Amathiphu awusizo wokuya eRoma
Idolobha laseRoma liyindawo eheha izinkulungwane zezivakashi minyaka yonke, futhi akumangalisi ...
Uhambo oluvela eBangkok
Uya eBangkok? Bese ubeka izinsuku ezimbalwa zokuvakasha okuvela eBangkok: amanxiwa, izimakethe, amathempeli namabhishi amakhulu.
Thola ezinye zezizathu futhi ngaphezu kwakho konke amathiphu ambalwa wokujabulela uhambo lobhaka, umuzwa omusha.
Amaholide asehlobo imvamisa afana nolwandle, ilanga, ulwandle nebha yasolwandle. Ucwaningo oluhlukahlukene lukhombisa ukuthi okungenani eyodwa ...
Jabulela izinhlelo ezahlukene zokujabulela amaholide nezingane. Lezi izinhlelo ezinhle uma sizohamba njengomndeni.
Ubuchwepheshe obusha busenze indlela yethu yoshintsho ekuhambeni futhi sikhululeke kakhudlwana futhi salula. I-smartphone yethu ...
Ungayinakekela kanjani impilo yomndeni phakathi nohambo
Thola eminye imibono yokunakekela impilo yomndeni phakathi nohambo. Kubalulekile ukucabangela ngisho nemininingwane emincane kakhulu.
Ngabe undizile noma uzondiza noma ungathanda ukundiza ne-Emirates? Ingenye yezindiza ezihamba phambili emhlabeni ngakho-ke thola ukuthi kunjani, okuhle nokubi.
Umhlahlandlela wokuthola inombolo ye-Visa kwipasipoti noma i-visa, idokhumenti ebalulekile yokuya kwamanye amazwe. Uyazi ukuthi ungayithola kanjani?
Namuhla sethula uchungechunge lwamathiphu wokuthola izindiza ezingabizi kakhulu. 5 isiyonke lokho ngeke nje konge imali kepha futhi nesikhathi.
Amathiphu wokuhamba nenja yakho emhlabeni jikelele
Sikunikeza amathiphu ambalwa wokuhamba nenja yakho emhlabeni wonke, imibono engenza kube lula kuwe ukuya eholidini nesilwane sakho.
Amathiphu wokujabulela uhambo olude lendiza
Lapho kufika ihlobo, abaningi baqala amaholide abo abelokhu elindelwe. Abanye baya ezindaweni ezikude okufanele bazijwayeze ...
Amathiphu wokuhamba ngesitimela ohambweni
Thola amanye amathiphu nezinzuzo zokuhamba ngesitimela, isithuthi esingathandwa kangako, kepha kungaba ukukhetha okuhle.
Amathiphu wokwenza okuhle ngendiza ende
Sikunikeza amathiphu ambalwa wokusebenzisa kahle indiza ende. Indlela enhle yokuthwala wonke lawo mahora endizeni.
Ngabe uya eLondon kuleli hlobo? Uma ufuna ukukujabulela, ungabalekela idolobha liye eBrighton, Portmouth, Salisbury, Whitstable ...
Amathiphu okujabulela amaholide akho ogwini
Thola amanye amathiphu alula wokujabulela iholide lakho elilandelayo ogwini. Imibono yokuthi konke kulungiselelwe futhi ungamangali.
Ihlobo eBerlin, okufanele ukwenze nokuthi ungalijabulela kanjani
Ngabe uya eBerlin ehlobo? Kuqhuma ngempilo uma kushisa ngakho bhala phansi ukuthi yini ongayenza: ukubhukuda emachibini noma emachibini, udle ngaphandle, uhambe uhambe ...
Izizathu zokuhamba kaningi
Esihlokweni sanamuhla sangeSonto sikunikeza izizathu ezi-5 zokuhamba kaningi, udinga ezinye ezingaki? Uyaphi ngokulandelayo?
Uma uthanda ukugqwayiza kwaseJapan uyazi uHayao Miyazaki. ETokyo, qiniseka ukuthi uvakashela iGhibli Museum, izwe lezimangaliso!
Izinto eziyi-8 okungafanele uzenze lapho uhamba ngemoto
Umqondo wokushaya umgwaqo neqembu labangane ukuze niqhubeke nokuzijabulisa uyajabulisa ngempela. Noma yini…
Amathiphu wokonga ngesikhathi samaholide
Sikunikeza amanye amaqhinga alula okuzokwazi ukuwonga lapho uhlela futhi ujabulela iholide elilandelayo, kunoma iyiphi indawo.
Amathiphu wokuqasha imoto ngesikhathi samaholide akho
Thola yonke imininingwane oyidingayo ukuze uqashe imoto ngamaholide akho, kusuka ekukhetheni inkampani kumshuwalense.
Uhambo oluhamba phambili oluvela eSeville
Uma uhamba uhambo oluya eSeville, ungakhohlwa ukuthola okuzungezile. Kunamadolobha amaningi okufanele uvakashelwe ngaphakathi kwebanga lokuhamba! ECórdoba, eCadiz, eJerez de la Frontera ...
Unganqikazi ukwazi iSan Francisco! Ukuwela iSango Legolide, ukuvakashela iChinatown neCity Hall noma ukuhambela imigwaqo yaso nge-tram kuzoba kuhle.
Ungazihlela kanjani ukuphunyuka ngempelasonto
Thola eminye imibono esebenzayo ukuhlela kahle ukuphunyuka kwakho ngempelasonto. Uhambo oluncane esingaluhlela ngokushesha.
Izikhangibavakashi eSydney ongaphuthelwa zizo
Ngabe uya eSidney? Nalu uhlu olufushane lwezinto okufanele uzenze: khuphuka iBhuloho, i-kayak noma isikebhe, nokuhamba ngezinyawo. Jabula!
Ukuhamba nesilwane sakho kungenzeka
Ukuhamba nesilwane sakho kungenzeka namhlanje ukuthi sesivele sithola izikhungo eziningi ngokwenqubo nendawo yokuhlala enikelwe yona.
Izincomo nezeluleko zezempilo zezindawo ezi-3 ezahlukahlukene (II)
I-athikili yanamuhla ingukuqhubeka kosuku lwayizolo. Sibuya nezincomo nezeluleko zezempilo ngezindawo ezi-3 ezahlukahlukene (II): India, Arabia naseJordani.
Ukufuduka wukufuduka kwesibalo sabantu, okwenzeka kusuka endaweni eyodwa kusuka kwenye kuya kwenye indawo.Yiziphi izinhlobo zokufuduka kwabantu ezikhona?
Izincomo nezeluleko zezempilo zezindawo ezi-3 ezahlukahlukene
Namuhla sizoya ngokwengeziwe ngezinkinga zezokwelapha futhi okuyisidina kakhulu ekuhambeni futhi sikulethela izincomo nezeluleko zezempilo ngezindawo ezi-3 ezahlukahlukene.
Izikebhe ezi-5 nezinye izeluleko zokuhamba kulo 2017
Izikebhe ziyindlela yokuphumula njenganoma iyiphi enye. Ngemisebenzi ehlukahlukene yokuzilibazisa kanye nethuba lokuvakashela ...
Yini okufanele uyenze ngenkathi ulinde indiza
Kulesi sihloko sangoMgqibelo sikunikeza uchungechunge lwezeluleko zalokho okufanele ukwenze ngenkathi ulinde indiza esikhumulweni sezindiza. Uvalelise ngokudinwa.
Izinto ezingakumangaza uma ungumfokazi futhi uvakashele eSpain
Esihlokweni sanamuhla sizokutshela okuncane ngeSpain kanye "nezinto eziyinqaba" zayo ezingakumangaza uma ungumfokazi futhi usivakashele.
Izindawo emhlabeni jikelele lapho ukuvakashelwa kungavunyelwe
Esihlokweni sanamuhla, sikunikeza izindawo ezi-5 emhlabeni jikelele lapho ukuvakashelwa kungavunyelwe khona. Uma unesithakazelo, funda ukuze uthole ukuthi ziyini.
Amathiphu nemibono yokuhamba wedwa
Sikunikeza amathiphu awusizo wokuhamba wedwa emhlabeni jikelele, into eyenziwa abantu abaningi ngokwengeziwe futhi lokho kungaba yinto enhle kakhulu.
Amathiphu awusizo wokuhamba ushibhile
Thola amanye amathiphu asebenzayo wokufunda ukuthi ungabiza kanjani ushibhile kulo nyaka. Ungayithola kanjani indawo yokuhlala nezindawo ngentengo enhle.
Izindlela zokonga ukuhamba
Kulesi sihloko sethula okhiye bokugcina ukuhamba, ikakhulukazi izindlela ezi-5 ezisetshenziswa kakhulu ngabahambi ukwenza lokho.
Izinketho ezishibhile zokuhamba
Kulesi sihloko sikutshela ukuthi ungahamba kanjani ngokwezomnotho ngalezi zinketho ezishibhile ozozihamba: isitimela noma indiza, ihhotela noma ukuhlala nabanye, njll.
Uyazi ukuthi yini ezokuvakasha zokuzingela? Kuyinto enzima ukucacisa egameni kodwa uma ngikhuluma nawe ...
Sikukhombisa izimali ezahlukahlukene zase-Asia enkambweni yamanje yamanje ukuze ukwazi ukuhlukanisa futhi uwahlukanise ngaphandle kwezinkinga.
Yiziphi izingubo nezinye izinto okufanele uzithathe lapho uhamba ngesikebhe?
Uma iholide lakho elilandelayo lizosetshenziselwa isikebhe esikhulu, lapha sikutshela ukuthi yiziphi izingubo nezinye izinto okufanele uzithathe ku-cruise.
Uhamba kanjani ngesilwane esifuywayo, imininingwane nolwazi
Ukuhamba nesilwane sasekhaya yinto eyenziwa ngabantu abaningi namuhla, ngoba ngelinye ilungu lomndeni, ngakho-ke kufanele wazi ukuthi ungakwenza kanjani.
Amathiphu wokuhamba okokuqala lapho uhamba ngesikebhe
Uma uzoqala ukuhamba ngesikebhe, ungaphuthelwa yilezi zeluleko ezidingekayo ukuze ujabulele kakhulu.
Ungaluhlela kanjani uhambo, imibono eyisisekelo
Sikunikeza imibono eyisisekelo yokuhlela uhambo ngendlela efanele, kusuka kwezokuthutha kuya endaweni yokuhlala nemininingwane emincane lapho uya khona.
Enye yezinto ezimnandi kakhulu empilweni ukuhamba. Ukwazi wonke amagumbi omhlaba kusivumela ukuthi sithole okuhlangenwe nakho ...
Atholakala kuphi amanxiwa asendulo?
Uma ungumthandi womlando, wasendulo, wokwazi ukuthi kwenzekani ezindaweni ezithile, le ndatshana ...
Amathiphu nezincomo uma kunguhambo lwakho lokuqala lokuzimela wedwa
Ukuthatha uhambo kuhlala kuyisizathu senjabulo, ikakhulukazi uma kungokokuzilibazisa hhayi ngesibopho, ukuzibophezela ...
IBaltic Sea Cruises 2016
Usenesikhathi sokubhuka umkhumbi olwandle olwandle iBaltic! Ngikushiya okunye ukunikezwa namathiphu ukuze wazi lezi zindawo ezinhle.
Sikunikeza amathiphu wokuhamba nezingane, ukukwenza kube yinto enhle kuwo wonke umndeni ofisa ukuphinda.
Kuhlala kunesikhathi sokuqala sayo yonke into, ngisho nokundiza. Uma uthatha indiza yakho yokuqala kungekudala, le ndatshana ingaba usizo olukhulu.
Lezi ngezinye zezinto ezenzeka kuwe lapho usohambweni: Ngabe uzizwa ukhonjwe ngazo zonke, noma mhlawumbe nezinye nje?
Ungapakisha kanjani kahle ukuhamba
Amaholide aseduze kwekona futhi nawo afika ngezindlela zokubalekela olwandle, e ...
Yonga ekuqashweni kwemoto yakho kula maholide
Ukuhamba usuka endaweni eyodwa uye kwenye ngaphandle kokuncika kunoma ngubani kuhle, akunjalo? Qaphela lawa macebiso wokonga imali ngokuqasha imoto yakho.
Amathiphu wokulwa nokugula kokuphakama
Ukugula okuphezulu okwesabekayo noma i-soroche igama elinikezwe ukusabela komzimba womuntu njengomphumela ...
Ngabe amakhadi abavakashi aseParis afanelekile noma cha?
Kukhona ikhadi lesaphulelo sabavakashi kubo bonke abahambi abavakashela eParis, ukuthi iliphi elizoba ngelakho? Thola, wonge imali futhi ujabulele!
Amafomula ayisikhombisa okuhamba emhlabeni ngenkathi usebenza
Amaholide akuyona ukuphela kwendlela yokubona umhlaba futhi akudingekile ngaso sonke isikhathi ukuthi ugcine imali eningi ...
Izindawo zokuxhumana eziyisithupha zokuhlala mahhala emhlabeni jikelele
Uma ufuna ukuzungeza umhlaba uhlangana nabantu futhi ungenayo imali ongayonga, into enhle kakhulu ukusebenzisa la manethiwekhi wokuxhumana ukuze uthole indawo yokuhlala yamahhala nokuhamba!
Amathiphu wokuthola okuningi ku-cruise
Izikebhe ziyindlela yokuphumula njenganoma iyiphi enye. Kodwa-ke, kubantu abaningi uhambo olwandle luyafana ...
Yimaphi amapaki amaFlegi ayisithupha ahamba phambili eMelika?
Thola ukuthi yimaphi amafulegi ayisithupha ahamba phambili e-United States. Ama-roller coasters ahlaba umxhwele agqama ngokuphakama kwawo nangejubane eliphezulu.
Iminyuziyamu yaseNew York imahhala nini?
Siyakuthokozela ukuba khona kweminyuziyamu yamahhala emhlabeni jikelele. Kulungile, umqondo omuhle. Phela…
Amalungelo abagibeli bomoya
Uma ungawazi amalungelo abagibeli ngendiza, usemusa wezindiza ukufuna noma yiluphi uhlobo lwenkinga. Thola ngamalungelo akho lapha.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokuhamba
Thola ama-Apps ahamba phambili, kusuka kuzinhlelo zokusebenza ukuthola izindiza eziya kwabanye ukusisiza lapho siya khona, sifuna izindawo ongazivakashela.
Amapulatifomu okusetshenziswa ngokubambisana ama-5 azokusiza ekuhambeni kwakho
Yebo, sisenkingeni; yebo, kunabantu abambalwa nabambalwa abangakwazi ukukhokhela "ukunethezeka" kokuhamba ...
Yiziphi izinjini zokusesha ezihamba phambili
Lapho sizokwenza noma yiluphi uhambo, noma ngabe ukuzilibazisa noma ibhizinisi, sihlala senza izinyathelo ezifanayo: Sivula ...
Bhala phansi lawa macebiso ukuvakashela i-Iguazu Falls ngo-2016
Konke odinga ukukwazi ukuhamba nezilwane ezifuywayo
Imindeni eyisithupha kwayishumi inesilwane esifuywayo eSpain. Sekukonke, ngaphezulu kwezilwane eziyizigidi eziyi-16 eziningi ...
Ngabe uzohamba ngendiza? Ungakwazi yini ukuletha ukudla endizeni? Thola ukuthi yini ongayiphatha noma ongakwazi ukuyiphatha emithwalweni yakho nokuthi yiziphi ezingasetha ama-alamu.
Ngosuku luka-Valentine, fly ngebhaluni lomoya elishisayo phezu kweMadrid futhi ujabulele ukubukwa
Ingabe uhlela ukubaleka phesheya? Lawa amanye amathiphu awusizo okufanele uwagcine engqondweni lapho uhlela uhambo.
Ukuhamba ngaphezulu, injongo yango-2016
Bhala okulandelayo ohlwini lwakho lwezinqumo: "Travel more, purpose for 2016." Kungale ndlela kuphela lapho uzokhula khona njengomuntu futhi uthole okuhlangenwe nakho.
Nawa amanye amathiphu alula wokuhamba okuphephile nokuvikelekile. Ungakhohlwa ukuthi ukuhlela noma yiluphi uhambo kusengaphambili kusivikela ezimangalisweni ezimbi.
UMnyango Wezangaphandle udwebe uhlu lwamazwe ayingozi kakhulu kwezokuvakasha. Uma uzothatha uhambo maduzane, thola lapha.
Izindawo eziyingozi eMelika
Kulokhu okuthunyelwe sizoqhubeka nokwazi ukuthi yiziphi izindawo eziyingozi kakhulu e-United States ukuze ube nolwazi ngalokho ongakuthola
I-Woodside, Phakathi Kwezindawo Eziyingozi Kakhulu eMelika
Phakathi kohambo esiluthathayo kwezinye zezindawo eziyingozi e-United States, sifika eWoodside, indawo eseNingizimu Carolina.
Iningi lamawebhusayithi avakashelwe yiRural Tourism
Ngalesi sikhathi sizokwethulela amawebhusayithi wezokuvakasha asemakhaya avakashelwa kakhulu. Okokuqala sithola ...
Yimaphi omagazini abahamba phambili?
Ngalesi sikhathi sizothola ukuthi imaphi omagazini bezokuvakasha abahamba phambili. Ake siqale ngokusho iNational Geographic Traveler, umagazini ...
Izicelo eziphezulu zokuhambela eRoma
Lesi sikhathi sizokwethula kuzicelo ezivelele kakhulu zokuya eRoma. Ake siqale ngokusho kukaKatie Parla ...
EBali kunezinyoka, singayithola eyodwa noma cha konke kuyindaba yenhlanhla.
Tricks ukuthatha izithombe ezinhle ebhishi
Isikhathi sehlobo siseduze kakhulu futhi izinga lokushisa elifudumele likumema ukuthi uye olwandle uye kotini uphumule ...
Izindlela Zokuhamba Olwandle
Ukuthuthwa kolwandle kungenye ezosivumela ngqo ukuthi sikwazi ukuhamba ngaphezulu kwamanzi, ngawo ...
I-Paragliding: I-Adventure Sport esivumela ukuthi sihambe
Namuhla sizozijwayeza ukusebenzisa i-paragliding, umdlalo osivumela ukuba sikwazi ukundiza ukusuka eziqongweni sidlule ...
Inqubomgomo yokubekezelela izidakamizwa ezithambile ingenye yezinto eziningi ezikhangayo iNetherlands ezinikeza izivakashi, ngokungeziwe ...
Abahleli Bokuhamba Okuhamba Phambili Kwe-inthanethi
Ngalesi sikhathi sizokhuluma ngamanye amathuluzi awusizo we-inthanethi kubahambi. Ake siqale ngokuncoma ku-Tripit ukuthi hhayi ...
IRoyal Caribbean: Enye Indlela Ehle Yezingoma Ezingashadile
Ungathanda ukuhamba wedwa bese ubuya uhambisane? Uma njengamanje ungenaye umlingani, futhi ufuna inkampani, khona-ke uzoba nentshisekelo yokwazi ...
Isimo sezulu seLima: Isimo sezulu enhlokodolobha yasePeruvia
Lesi sikhathi sizoya ePeru, izwe eliseNingizimu Melika, elaziwa umhlaba wonke ngokuba nelinye le ...
IComoros Islands: Imininingwane ejwayelekile, amasiko kanye nokufuna ukwazi
Masipakishe izikhwama zethu futhi sihlele uhambo lokuya endaweni enhle kakhulu yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Nathi…
Ukucatshangelwa kokuSebenza ku-Cruise
Uma ungomunye walabo abathanda ukuhamba ngesikebhe futhi ufuna ukuhamba umhlaba wonke ...
ILake Geneva: Ezokuvakasha zasemakhaya nezemvelo eSwitzerland
Indawo enhle okungafanele ikuphuthe ngesikhathi sohambo lwakho lokuvakasha eSwitzerland, ngokungangabazeki ...
Imikhosi yeSalsa emhlabeni
ISalsa uhlobo lomculo oludansa kakhulu eLatin America, kepha ikakhulukazi eCaribbean. Lokhu kushaya okunamathelayo okunqobile ...
Amasiko omphakathi wase-Italy
Enye yezinto ezidume kakhulu kumaNtaliyane yisimo sabo sengqondo, banothando futhi bazwakala kakhulu. Bangabantu…
I-Agua de Cacao, isiphuzo se-Acapulco
Kuyaziwa ukuthi iMexico yaziwa emhlabeni ngamabhishi ayo nempilo yayo yasebusuku. Esinye seziphuzo ezijwayelekile ...
Izimangaliso Zemvelo zaseJamaica
IJamaica, ngaphandle kwamabhishi ayo amahle, ibuye inezindawo ezithile zemvelo okufanele uzenze. Phakathi kwazo kukhona: ...